Cover Star - ဟန်နွေ - Celebrities 8DaysaWeek - Journal
Cover Star - ဟန်နွေ
04 April, 2019, 12:26 PM
မကြာမီ အချိန်အခါသမယ မှာတော့ မြန်မာလူမျိုးတို့ရဲ့ နှစ်သစ် ကူးအတာသင်္ကြန် ကို ရောက်ရှိလာ တော့မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတစ်ပတ် အတွက် 8days ရဲ့ Cover Star ကိုလည်း သင်္ကြန် အငွေ့အသက်လေးလည်း ပါပြီး၊ လူငယ်တစ်ယောက်ရဲ့ သင်္ကြန် ဖက်ရှင်ပုံရိပ်တွေကို တင် ဆက်ပေးထားပါတယ်။
Q.သင်္ကြန် နီးပြီဆိုတော့သင်္ကြန် ရင်ခုန်သံက...
A. သင်္ကြန် နီးပြီဆိုတော့ လူ ငယ်တွေရော လူကြီးတွေကပါ အ ရမ်းစိတ်လှုပ်ရှားကြမှာပါ။ ရုံးတွေ လည်းပိတ်တော့ ခရီးတွေထွက်ကြ မယ့် သူတွေလည်းရှိမယ်။ လူငယ် တွေဆိုလည်း အပီကဲမှာဆိုတော့ အ ရမ်းစိတ်လှုပ်ရှားပါတယ်။
Q. ကိုယ်တိုင်က ဒီနှစ်သင်္ကြန် မှာ ဘာအစီအစဉ်တွေ ရှိလဲ...
A . အခုလို ဃသလနမ ပုံထဲကလို ဝတ်ပြီး လည်ချင်ပေမယ့် တရားစ ခန်းဝင်မှာပါ။ နှစ်တိုင်းလည်း တရား စခန်းဝင်လာတာ ငါးနှစ်လောက်ရှိ ပြီ။ ကျန်တဲ့အချိန်တွေက မအား တော့ သင်္ကြန် မှာ တရားစခန်းဝင် ပြီး ယောဂီဝတ်ဖြစ်တာများတယ်။
Q . တရားစခန်းဝင်တာ မိဘ ဆန္ဒလား၊ ကိုယ့်ဆန္ဒလား...
A . ကိုယ့်ဆန္ဒပါ။ အနုပညာကို တစ်နှစ်၊ နှစ်နှစ်လောက်လုပ်ပြီးတဲ့ အချိန်မှာ သံဝေဂရလာတာ။ တရား ရလာတာလားမသိဘူး။ စိတ်အရမ်း ရှုပ်လာတဲ့အခါ ဘုရားတရားကိုပဲ ပိုလုပ်ဖြစ်တယ်။ အနုပညာအလုပ် က အရမ်းရှုပ်ထွေးပြီး သည်းခံရ တော့ အများကြီး သင်ခန်းစာရ တယ်။
Q . သင်္ကြန် မှာ စီးပွားရေးအရ ဝင်ငွေကောင်းတဲ့အချိန် တရားစခန်း ဝင်တဲ့အခါ...
A . အခုလည်း သင်္ကြန် တွင်း အလုပ်တွေ ကမ်းလှမ်းထားတာ ရှိ တယ်။ အဲဒါတွေအကုန်လုံး မလုပ် ဘဲ တရားပဲကျင့်ကြံ အားထုတ်ပါ မယ်။ အလုပ်တွေ ကမ်းလှမ်းလာ လည်း ငြင်းလိုက်တယ်။ နှမျောတော့ နှမျောပေမယ့် ကုသိုလ်ကောင်းမှု လုပ်ရင် လုပ်သလောက် ကောင်းတဲ့ အရာတွေ ထပ်လာမယ်လို့ ယုံကြည် ပါတယ်။
Q . အမှတ်တရ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ သင်္ကြန် ရှိခဲ့ဖူးလား...
A. သင်္ကြန် အမှတ်တရရှိတယ်။ (၇၊ ၈၊ ၉၊ ၁၀)တန်းတွေမှာ အဖေနဲ့ အမေက လူငယ်ဆန်တော့ ကားနဲ့ လျှောက်လည်ဖြစ်တယ်။ ပထမဆုံး First Love ကသင်္ကြန် မှာတွေ့ခဲ့ တာပါ။ အခုတော့ သူကမိန်းမရပြီး ကလေးရနေပါပြီ။
Q . သင်္ကြန် မှာလည်ရင် First Love ကို သတိရမှာစိုးလို့ တရား စခန်းဝင်တာလား...
A . အချစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ကံမ ကောင်းခဲ့တော့ သိပ်ပြီးသတိမရပါ ဘူး။ First Love အကြောင်း အခု ချိန်ပြန်စဉ်းစားရင် ရယ်စရာကြီး။ တရားစခန်းဝင်ဖြစ်တာက သူ့ကို မ မေ့နိုင်တာလည်းမဟုတ်ဘူး။ ဘယ် သူ့ကိုမှ မမေ့နိုင်တာလည်း မဟုတ် ဘူး။ ပိုတည်ငြိမ်ပြီး ရင့်ကျက်ချင် လာလို့။ အရာအားလုံးကို စိတ်နဲ့ ဖြေနိုင်အောင်လို့ တရားစခန်းဝင် တာပါ။